Waxaan ahay Afrikaan! | Hassan Mudane
November 27, 2016 ·	by Hassan Mudane ·	in Faallo	· Leave a comment
Magacaygu waa Soomaaliya, waxaan dhacaa dhanka bari ee qaaradda Afrika. Waxa aan isku arkaa in aan ahay kan ugu sareeyo san ku neefle, waxa aan isku arkaa in aan ahay kan ugu caqliga badan san ku neefle, waxa aan isku arkaa in aan ahay kan ugu laandheersan san ku neefle, iyada oo sidaas ah hadana markii wax la iga weydiiyo sooyaalkaygii ama asalkaygii taariikheed waan aamusaa waayo ma garan karo meel aan ku sheego asalka taariikhdayda.
“Dad iyo dal aan taariikh lahayn waa dad mustaqbalkooda dhummay”
Madaxweynihii hore ee dalka Botswana, Sir Seretse Khama
Waxaan leeyahay Hooyo iyo Aabbe, Hooyaday waxay ila jeceshay mustaqbal wanaagsan waayo marwalba waxay iiga sheekaysaa nolol qurux badan, waxay ii abuurtaa rajo fiican, waxayna iga celisa cadowga, balse Aabbahay wuxuu ila jecel yahay waxa aysan hooyaday ila jecleyn, wuxuu marwalba isku dayaa in uu igu beddesho lacag isaga oo raba in uu ii guuriyo wadaad aan ii qalmin. Sidoo kale, waxaan leeyahay labo macallin; macallinkayga ‘Gar’ (Timaha ka baxa dhabannada iyo daamanka ragga) wuxuu marwalba iiga sheekeeyaa iguna dhahaa bal eeg diintaada, quruxdaada, sankaaga dhuuban, timahaaga tidcan, ma kuu sheegaa asalkaaga? Waxaad tahay Carab! Balse macallinkayga ‘Shaarib’ (Timaha ka baxa bushinta sare ee ragga korkeeda) isagana wuxuu igu dhahaa bal eeg midabkaaga, dhulkaaga, dhaqankaaga, waxaad tahay Afrikan asal ah. Habeenkii ma seexdo mana nasto maalintii waayo waxaa qalbigayga ku hardamaya labadaas macallin. Waxaan ku noolahay nolol ku dhisan cabsi iyo welwel waayo waxaan ka cabsanaa in aan gacanta u galo cadowgii ay hooyaday iga celinaysay ama in uu Aabbahay ii guuriyo nin aan ii qalmin.
Dadka aan ka sareeyo waxay ii maleeyaan in aan ahay qof xurriyad leh oo wax dooran karta balse weli ma helin xurriyadii aan wax ku dooran lahaa waayo waxaan ahay qof aan doorasho lahayn, weli ma helin fursadii aan kaga hadli lahaa runta waayo waxaan ahay qof aan hadli karin, weli ma helin fursadii aan ku raadin lahaa sooyaalkii taariikhdayda waayo waxaan ahay qof aan waxba qorin. Dadbaa igu dul socda balse aan darreensaneen qiimaha aan leeyahay, dadbaa i maamula balse aan garaneen xaqa aan ku leeyahay. Dadbaa il-taban igu eega waxayna dhahaan mustaqbalkaaga waa mugdi, dadbaa iyagana il-togan igu eega oo waxay dhahaan mustaqbalkaaga waa iftiin iyo rajo fiican. Rajada kaliya ee aan leeyahay waa hooyo iyadana weli meysan helin fursadii ay wax iigu qaban lahayd ama ay igu maamuli lahayd.
Ugu dambeyntii, waxaan ahay gabar qiimo badan balse nasiib darran, hooyaday waxay iigu naanaysaa Maandeeq balse Aabbahay waxa uu iigu hal qabsadaa Hashii, markii la isku qabto labaas magac waxay noqonaysaa ‘Hashii Maandeeq’ waxaan ku magac dheerahay Soomaaliya, waxaan ka sii ahay Afrikaan! Ee Barasho Wanaagsan.
← Ka feker Yoolkaaga!
Soomaaliya waxay soo maraysaa qarnigii 16AAD! →